Kitra any Frantsa: hifindra ao amin’ny Stade Rennais i Morel | NewsMada
Kitra any Frantsa: hifindra ao amin’ny Stade Rennais i Morel
Taorian’ny fahataperan’ny «Can 2019», ho an’ny Barean’i Madagasikara, izay nihintsana teo amin’ny ampahefa-dalana, maro ireo mpilalao malagasy nandrafitra ny ekipam-pirenena tamin’izany fihaonana izany misy maka. Anisan’ireny ilay vodilaharana, i Jeremy Morel. Raha tsiahivina, nilalao tao amin’ny Olympique Lyonnais izy ary efa tapitra ny fifanarahany amin’io ekipa io.
Ankehitriny, nahazo fifanarahana vaovao ny tovolahy ka hilalao ao amin’ny Stade Rennais. Taom-pilalaovana iray ihany ny hijanonany ao. I Morel izay efa 35 taona, saingy nahatonga an’i Olivier Létang, filohan’ity ekipa ity, naka azy, ny traikefany sy ny fahaizany. «Mpilalao manana ny fahaizany i Morel, indrindra fa ny traikefa eo amin’ny fifaninanana eoropeanina, izay mahafantatra tsara ny fihaonana amin’ny Ligue 1. Mifanaraka tsara amin’ny masontsivana tadiavinay izy», hoy ity mpitantana ny Stade Rennais ity.
Tetsy ankilany, tsy nanafina ny hafaliany i Morel, amin’izao hilalaovany ao Rennais izao, ka nilazany fa manana risipo be izy, ary hanao izay azony atao hizara ny traikefany. Nomarihiny fa efa maro ireo klioba nitady azy, toy ny Stade Brestois, izay hiakatra ao amin’ny “Ligue 1”, amin’ny taom-pilalaovana manaraka. Eo koa ny klioban’ny Dijon sy ny FC Lorient, ao amin’ny “Ligue 2”.
Tsiahivina fa tsy dia nahazo fotoana betsaka nilalaovana izy, nandritra iny “Can 2019” iny noho ny ratra nahazo azy. Inoana anefa fa hampisandratra indray ny lazan’i Madagasikara izao hilalaovany ao amin’ny Stade Rennais izao.